नेप्सेसँगै घट्यो कारोबार रकम - Naya Patrika
नेप्सेसँगै घट्यो कारोबार रकम
काठमाडौं | साउन २१, २०७५
साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन पनि सामान्य अंक घटेर बन्द भएको बजार, यस साताको पहिलो दिन पनि सोही गतिलाई निरन्तरता दिएको छ । नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ । बजार सुस्त गतिमा रहेका कारण लगानीकर्ता अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेका हुन् । केही लगानीकर्ता भने थप घाटा नहोस् भनेर सेयर बिक्री गर्नतर्फ लागेको एक ब्रोकरले बताए ।
बजारमा अहिले खासै खरिदकर्ता र विक्रेता नभएको उनको भनाइ छ । बजारले निश्चित दिशा लिन नसकेका कारण लगानीकर्ता अन्योलमा परेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेका छन् । तैपनि, बजारमा त्यसको प्रभाव न्यून छ । ब्याजदर घट्दा पनि बजार नबढेका कारण लगानीकर्तामा थप अन्योल सिर्जना भएको एक लगानीकर्ताले बताए । तर, केही दिनमा नै बजारले सकारात्मक गति लिने उनको भनाइ छ ।
नेप्से परिसूचक यस दिन १ दशमलव ४३ अंक घटेर १ हजार १ सय ८९ दशमलव ८८ बिन्दुमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन शून्य दशमलव १८ अंक घटेर २ सय ५० दशमलव ९७ बिन्दुमा पुगेको छ । यस दिन १ सय ६० कम्पनीहरूको २ हजार ९ सय ८९ पटकको कारोबारमा १६ करोड ७० लाख ४९ हजार ६ सय ८४ रुपैयाँबराबरको ५ लाख ९७ हजार ५ सय ९७ कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिनको कारोबार रकम १९ दशमलव ६६ प्रतिशत कम हो । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ४१ दशमलव ६२ स्केलमा पुगेको छ । आरएसआई न्युट्रल जोनमा नै रहनुले बजारमा सेयर खरिद–बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको
संकेत गर्छ ।
कारोबार रकम र सेयर संख्याका आधारमा यस दिन सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड अगाडि रहेको छ । सो जलविद्युत् कम्पनीको यस दिन ८० लाख ९४ हजार २ सय ७२ रुपैयाँबराबरको २५ हजार ७ सय ८४ कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । कारोबार रकमका आधारमा भने यस दिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड अगाडि रहेको छ । सो वाणिज्य बैंकको यस दिन १ सय ४ पटक सेयर खरिद–बिक्री भएको छ ।
घटेको बजारमा सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनीका सेयरधनीले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका लगानीकर्ताले भने यस दिन ५ प्रतिशतभन्दा बढी गुमाएका छन् । कारोबारमा आएका १ सय ६९ कम्पनीमध्ये यस दिन ५७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ७९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बाँकी २२ कम्पनीको सेयर मूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
आइतबार कारोबारमा आएका १० समूहमध्ये ५ समूहको परिसूचक बढेको छ भने ५ समूहको घटेको छ । यस दिन अन्य समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत, होटेल समूहको शून्य दशमलव २३ प्रतिशत, जीवन बिमा समूहको शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत र लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत बढेको छ । उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक यस दिन शून्य दशमलव ९१ प्रतिशत घटेको छ ।
त्यसैगरी, निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक यस दिन शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत, जलविद्युत् समूहको शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक समूहको शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत र वित्त समूहको शून्य दशमलव १६ प्रतिशत घटेको छ ।
घलेम्दीको आइपिओ निष्कासन बन्द
घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले असार २२ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको आइपिओमा आवेदन दिने म्याद साउन २० गते सकिएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रू. १ सय अंकित मूल्यका ५ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्र म्यादी जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि सो सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको हो । सो सेयर बाँडफाँड भएको मितिले ३ वर्षसम्मका लागि बिक्री गर्न बन्देज गरिएको छ । कम्पनीको आइपिओलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपी आइपिओ ग्रेड फोर रेटिङ प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको आधारभूत पक्ष औसतभन्दा कमजोर रहेको संकेत गर्छ । कम्पनीको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक भिबोल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
आरएसडिसीको हकप्रद निष्कासन बन्द
आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले असार १७ गतेदेखि ५ बराबर ३ अनुपातमा निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने म्याद साउन २० गते सकिएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रू. १ सय अंकित मूल्यका २१ लाख ५९ हजार ७ सय कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३५ करोड ९९ लाख ५० हजार रहेको छ भने हकप्रद सेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५७ करोड ५९ लाख २० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि कम्पनीले जेठ २१ गते बुक क्लोज गरेको थियो ।
सिद्धार्थको हकप्रद निष्कासन बन्द
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले असार १७ गतेदेखि १० बराबर ३ दशमलव ५ अनुपातमा निष्कासन तथा बिक्री खुला गरहेको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने म्याद साउन २० गते सकिएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रू. १ सय अंकित मूल्यका २२ लाख ४४ हजार ९ सय ७३ दशमलव ५० कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६४ करोड १४ लाख २१ हजार रहेको छ भने हकप्रद सेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८६ करोड ५९ लाख १८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीले जेठ १ गते बुक क्लोज गरेको थियो ।
#नेप्सेसँगै घट्यो कारोबार रकम